Ireo kojakoja vaovao Malababa amin'ny fianjerana | Bezzia
Maria vazquez | 09/09/2021 18:00 | poketra, mameno, kiraro
Rehefa tsapanay fa tsy nizara ny tolo-kevitr'i Malababa taminao izahay tamin'ny taona lasa, dia tianay ny manamboatra azy. Ahoana? Manantona ny zava-baovao amin'ny fahalavoana an'ity marika mpamorona marika ity izay namboarina etika tany Espana.
Kitapo, kiraro, firavaka ... Fitaovana malababa Izy ireo dia hamela anao hamita ny akanjo amin'ny fomba kanto. Ireo kojakoja, teny an-dalana, dia aseho amin'ny loko maro karazana, izay ahitana rameva, manga, miboridana, mena ary mainty. Jereo ny endrik'izy ireo vaovao!
1 Ny kiraro
2 Ny kitapo
Tianay ny fahatsoran'i Cata, ilay mamy manana tenda maranitra, vita amin'ny hoditr'ondry voasasa izay maneho ny fononay. Fototra iray hafa fa ity mitafy aingam-panahy ity miaraka amina vozona mihidy sy ombelahin-tongony ambany dia Ramona, eo amin'ny fonony ihany koa. Ary raha mitady halavany bebe kokoa ianao dia afaka mitodika any amin'ny Nicolsa ho an'ny kinova avo indrindra miaraka amin'ny haavo ombelahin'ny 5,55 sm izay hitanao amin'ny sary etsy ambany amin'ny manga.
Ny kitapo voarandrana nampiavaka ny orinasa hatrany izy ireo. Amin'ity fanangonana vaovao ity dia ahitantsika azy ireo amin'ny kinova misy habe lehibe sy kely kokoa ao anaty hoditr'omby mirandrana tanana. Ny kitapo fiantsenana Odette, sary etsy ambony, dia iray amin'ireo ankafizinay. Miasa, malalaka, tsara tarehy ary misy loko fito azonao isafidianana.
Mitady famolavolana manaitra kokoa? Ny kitapo Picnic angamba handresy lahatra anao amin'izay. Izy io dia toy ny teo aloha, kitapo hoditr'ondry nirandrana nefa misy mampiavaka azy toa endrika sobika ary ireo fehin-kibo nanaovana azy. Hita amin'ny habe roa sy loko telo izy io.
Hatramin'ny nahitako ny Fanangonana Petala Malababa sambany aho dia miaina amin'ny fitiavana azy. Ie, miaiky heloka aho. Tiako daholo ireo kavina ireo miaraka amina felam-boninkazo methacrylate tena maivana izay misy karazany hafa: fohy, lava ary mihantona amin'ny peratra varahina.
Tianao ve ireo kojakoja vaovao Malababa amin'ny fararano?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Bezzia » lamaody » mameno » Ireo kojakoja vaovao Malababa amin'ny fahalavoana